ओली सरकार विरुध्द अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने देउवा–प्रचण्डको साँठगाँठ साँच्चै हो ? – Hamrosandesh.com
ओली सरकार विरुध्द अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने देउवा–प्रचण्डको साँठगाँठ साँच्चै हो ?
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्षद्धय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच पछिल्लो समयमा दूरी बढ्ेर गएको छ । मुख्यगरि सभामुख चयनका बिषयमा दुवै अध्यक्षले अडान नछाडेपछि दूरी बढ्दै गएको हो । ओली सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई कुनै हालतमा सभामुख पद दिलाइ छाड्ने अडानमा छन् । प्रचण्ड पनि कुनै जुनसुकै जोखिम मोलेर भएपनि पूर्व माओवादी खेमालाई नै सभामुखमा पदमा स्थापित गराउने जोडबल गरिरहेका छन् ।
यहि निर्णयकै कारण गत हप्ता प्रचण्डले नेपाली काँग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवासँग भेटे लगत्तै सिन्धुपाल्चोकमा रात बिताउन पुगेका थिए । राजनैतिक बिषयले तनावमा आएका बेला प्रचण्ड एकान्तवासका लागि सिन्घुपाल्चोक जाने गर्दछन् । यस अघि सिन्धुपाल्चोकको सुकुटे रिसोर्टमा बस्ने गरेका प्रचण्ड यस पटक भने त्यहाँ नगएर पार्टीकै सामान्य कार्यकर्ताको घरमा एक रात बिताएर भोलिपल्ट राजधानी फर्किएका थिए । प्रचण्डको यो भ्रमणलाई यतिबेला राजनीतिक वृत्तमा अर्थपूर्ण ढंगले हेरिएको छ ।
प्रचण्डले सिन्धुपाल्चोक प्रस्थान गर्नु अघि आफ्नो खेमाका केही प्रभावशाली नेताहरुसँग परामर्श समेत गरेका थिए । सभामुखका लागि अग्नि सापकोटाको पक्षमा अडान लिइरहेका प्रचण्डलाई पूर्व माओवादी पक्षधरले कुनै हालतमा सभामुख पद नछाड्न दवाव दिएका छन् । सभामुख पद छाडेमा संवैधानिक परिषद्मा भूमिकाशून्य हुने भन्दै प्रचण्डलाई खतराको संकेत समेत गरेका छन् । प्रचण्ड निकट एक नेताका अनुसार, परिषद्मा भूमिकाशून्य बनाउने देखि कमजोर बनाएर छाड्ने ओली पक्षको रणनीति बुझिएको छ । यसबाट प्रचण्ड पक्ष सतर्क भएको छ ।
यहि सतर्कताकाबीच बुधबार साँझ पार्टीकै प्रभावशाली नेता बामदेव गौतमको निवासमा ओली ईतर मत राख्दै आएका नेताहरुको गोप्य उपस्थितिले पनि पार्टीभित्रको विवादलाई मलजल गरेको छ । उक्त गोप्य बैठकमा उपस्थित प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र स्थायी समिति सदस्य भीम रावलको उपस्थिति रहेको समाचार सूत्रले बताएको छ । बैठकमा सभामुखका बिषयमा पार्टीभित्र रहेको किचलो र प्रधानमन्त्री ओलीको अडानका बिषयमा छलफल चलाईएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको यो हठपूर्ण कदमको कसरी प्रतिवाद गर्ने वा यसको विकल्प के हुनसक्दछ भन्ने बिषयमा नेताहरुबीच छलफल चलेको सूत्रको दावी छ ।
सभामुखको नियुक्ति हुन नसकेकै कारण यतिबेला संसद अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । यसको सबै अपजस नेकपाको टाउकामा परेको छ । पार्टीभित्र प्रधानमन्त्री ओली पूर्व एमालेकै कतिपय नेताहरुको आलोचनाका पात्र बन्दै आएको र बेला बेलामा ओलीलाई राजनैतिक बल पु¥याउँदै आएका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड समेत यतिबेला ओलीसँग टाढिने अवस्था सिर्जना भएकै कारण पार्टीभित्रको विवाद मत्थर हुने भन्दा झन चर्किएर जाने सम्भावना बढ्दै गएकै अवस्थामा ओलीले पनि आफ्नो नेतृत्वको सरकारको दुई बर्षे बर्षगाँठ मनाउने तयारी गर्दै छन् ।
अबको पाँच हप्तापछि ओली सरकारले दुई वर्षे कार्यकाल पूरा गर्दैछ । संवैधानिक ब्यवस्था बमोजिम सरकारले दुई बर्षे कार्यकाल पूरा गरेपछि उ बिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न मिल्छ । यसरी हेर्दा पछिल्लो पटक विकसित घटनाक्रमले मुलुक कतै त्यसै दिशातर्फ उन्मुख त छैन भन्ने प्रश्न समेत उठ्न थालेको छ । यतिबेला अमेरिकी सहयोग स्वीकार गर्ने नगर्ने बिषयमा नेकपामै दुई भार देखिनु र यसले प्रत्यक्षरुपमै सभामुख प्रकरणसँग नाता गाँस्नुले पनि स्वयं नेकपा भित्रै पनि प्रधानमन्त्रीका बिषयमा बिभिन्न मतहरुले खेल्ने अवसर पाएका छन् ।
घटनाक्रमले एमसीसी नेकपाभित्र पस्नु र सभामुखमा यति ठूलो विवाद हुनुले धेरै संकेतहरु गरेको छ । सभामुखकै बिषयमा सहमति बन्न नसके संसदमात्र अनिर्णयको बन्दी नभई सरकार नै धरापमा पर्न सक्छ । यसको संकेत प्रचण्डले सिन्धुपाल्चोक जानुअघि नेपाली काँग्रेसका सभापति देउवालाई भेटेर दिइसकेका छन् । राजनीतिक चतूर खेलाडी प्रचण्डले बुढानिलकण्ठ पुगेर देउवालाई भेटेर ओलीलाई झस्काइदिएका छन् । भेटमा संवैधानिक आयोगको नियुक्तिबारे मात्र छलफल गर्न प्रचण्ड बुढानिलकण्ठ पुगेका थिएनन् ।
लामो समय यता दुई नेताबीच बढेको दूरी घटाउन पनि यो भेट भएको थियो । भेटमा दुवै नेताबीच आगामी दिनमा मिलेर जानसक्ने बारे समेत छलफल भएको छ । देउवाले प्रचण्डलाई विगतमै आफूलाई किन धोका दिएको ? भनी प्रश्न गरेका छन् । संसदीय चुनावमा प्रचण्ड ओलीसँग मिल्न पुगे । पार्टी पनि एक बनाए । तर, कार्यकारी अध्यक्षको अधिकार पाएपनि प्रचण्ड कतिपय नियुक्ति सम्बन्धी निर्णयमा कमजोर बनाइएका छन् । जुन सभामुख चयनमा देखिइसकेको छ ।
सरकारमा प्रचण्डको प्रभाव कम भएको मन्त्रीमण्डल फेरबदलमा समेत देखियो । उनी वर्षमान पुन, शक्ति बस्नेत र विना मगरलाई मन्त्रीमा कायमै राख्न सफल भएपनि ओलीको निर्णयका सामु निरीह देखिएका थिए । वामदेव गौतमलाई समेत ओलीले उपाध्यक्षको लोभ देखाउँदै आफ्नो पक्षमा पारेपछि प्रचण्ड निकै अप्ठ्यारोमा छन् । सिन्धुपाल्चोकमा आराम गर्दा उनले यी बिषयहरुलाई गम्भीरतापूर्वक केलाएर कुनै निर्णयमा जाने सम्भावना देखिन थालेको छ ।
प्रचण्ड जोखिम मोल्न सक्ने र आश्चर्यलाग्दा निर्णय लिनसक्ने नेता हुन् । डेढ दशकयता नेपाली राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा रहेका उनी विस्तारै पाखा लगाइन खोजिएका छन् । यसको सामना गर्न उनले जुनसुकै कठोर कदम चाल्न सक्छन् । सिन्धुपाल्चोकमा उनी त्यसै गएका होइनन् भन्ने घटनाक्रमले देखाउँदै जानसक्छ ।
प्रचण्ड कमजोर भएर रहने स्वभावका छैनन् । उनी नेकपाभित्र एउटा जंगलमा दुईवटा सिंहको शासनको अवस्था बनाइरहने पक्षमा पनि छैनन् । प्रचण्डले अबको डेढ महिनापछि कुनै न कुनै कठोर कदम चाल्न सक्ने संकेतहरु दिइरहेका छन् । यता विमर्शले पनि आफ्नो समाचारमा लेखेको छ, यसको सम्भावना देखेर बालुवाटारमा अधिकांश समय आराम गरेर बसेका प्रधानमन्त्री ओली झस्किएका छन् । सरलपत्रिकाबाट साभार गरिएको